Sida loogu shaqeeyo sabuuradaha sawirka si habsami leh | Abuurista khadka tooska ah
Sida loogu shaqeeyo sabuuradaha sawirka
Pablo Gonder | | Design Graphic, muujiye
Baro inaad la shaqee sabuuro badan oo Sawirka ah Si loo hagaajiyo xawaarahaaga iyo qummanaantaada habka shaqada marka aad fulinayso mashruuc garaaf ah oo u baahan adeegsiga noocyo badan oo naqshadaha ah, tusaale ahaan marka aan naqshadeynayno madaxyada shabakadaha bulshada ee kala duwan waxaan u baahanahay naqshad kasta si aan ula jaanqaadno cabbirada shabakad kasta oo bulsheed. Adeegsiga miisaska shaqada waxaan ku heli karnaa dhowr meelood oo ah Waxaan la shaqeeyaa tallaabooyin kala duwan Sidan oo kale, waxaan ula qabsan karnaa nashqadeynta madaxeena dhamaan shabakadaha bulshada.
Sawirqaade ayaa noo ogolaanaya inaan ku shaqeyno mashaariic si xirfad leh oo nidaamsan mahadnaq fudud Miisaska shaqada marka aan abaabulno dhammaan walxaha naqshadeyntayada awood u leh ku dhoofin qaab kontorool ah miisaska shaqada mid kasta. Wax yar ka baro wax ku saabsan barnaamijkan naqshadeynta muuqaalka sawirada ah ee 'vector fantastic'.
Si aad u awooddo kula shaqee sabuuradaha sawirka Waxa ugu horreeya ee aan sameyn doonno waa inaan ka saarno miisas badan oo ka shaqeeya aagagga shaqada, waxaan tan ku sameeynaa adigoo gujinaya miiska shaqada ee bar bidix Sawir qaade, ku xigta tan waxaan riixi doonnaa the menu sare halkaas oo uu dhigo miis shaqo oo cusub.
Waxaan abuuri doonnaa taatiko badan oo shaqeynaya sida ay u kala duwan yihiin naqshadeynta, tusaale ahaan haddii aan nashqad u heyno dhowr madax oo ka mid ah shabakadaha bulshada ee kala duwan waxa ay tahay inaan sameyno sameyso sabuurad mid kasta oo ka mid ah shabakadaha bulshada ee aan haysano.
Waxaan u sameynaa miis shaqo naqshad kasta oo aan haysanno.
Waxaan magacaabi karnaa mid kasta oo ka mid ah sabuuradda haddii waxaan gujineynaa magacyada Qeybta hoose ee midig, waxaan laba jibaareynaa waxaanna ku dhejineynaa magaca naqshadeynta aan ku leenahay miiskaas shaqada.
Waxaan badalaynaa magaca miisaska shaqada waxaanna ku amreynaa hadba baahida aan u qabno si aan u helno booskeenna shaqo sida ugu habboon oo suurtagal ah iyadoo laga ilaalinayo in waqti lagu lumiyo sababo la xiriira cilladda suurtagalka ah ee la soo saaray.
Shaashad kasta oo shaqeyn karta waxay yeelan kartaa a cabir gaar ah waxay kuxirantahay naqshadda aan haysanno, tan waxaan ku sameeynaa annaga oo beddelayna cabirrada ku jira liiska kore ka dib markii aan horey u riixnay aagga shaqada ka dibna miiska aan rabno inaan bedelno cabirka.
Haddii aan eegno sawirka kore waxaan arki karnaa sida uu jiro miisas kala duwan Mid kasta oo ka mid ah shabakadaha bulshada ee ugu muhiimsan, sidan ayaan u maareeyneynaa inaan ku dabaqno naqshadeena shabakad kasta si fudud annaga oo la jaanqaadeyna naqshadda cabirka miis kasta oo shaqo sida ku xusan shabakadeeda bulshada.
La shaqeynta nidaamkan waxay faa'iido u yeelan doontaa dhammaan noocyada kala duwan mashaariic garaaf ah maxaa yeelay waa nidaam shaqo oo xirfadle ah oo maalin kasta loo adeegsado warshadaha farshaxanka garaafyada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Sida loogu shaqeeyo sabuuradaha sawirka
Sida loo sawiro jilayaasha Disney ee Disney Parks
Banksy ma ahaa kii maaskarada saaray mid ka mid ah sawiradaadii?